Wholesale2019 ဝတ္ထု Coronavirus Antigen စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်သူနှင့်ထုတ်လုပ်သူ Immuno
အသုံးပြုသည် 2019 ဝတ္ထု coronavirus Antigen စမ်းသပ်မှု
ထုပ်ပိုး 1 စမ်းသပ်ပစ္စည်းများ / ထုပ်ပိုး box ကို
IMMUNOBIO 2019 ဝတ္ထု coronavirus Antigen Rapid Test (COVID-19 Ag) သည်လူ့လည်ချောင်းနှင့်နှာခေါင်းလျှို့ဝှက်ချက်များတွင် coronavirus SARS-CoV-2 ဝတ္ထုအသစ်ကိုတွေ့ရှိရန်အတွက်လျင်မြန်သော chromatographic immunoassay ဖြစ်သည်။
A. အမြန်စစ်ဆေးပါ၊ ၁၀-၁၅ မိနစ်စာမေးပွဲရလဒ်ကိုရယူပါ
C. စမ်းသပ်ရန်လွယ်ကူသည်, မလိုအပ်ပစ္စည်းကိရိယာများ
N Nasal နှင့် Saliva နမူနာနှစ်မျိုးလုံးအတွက်တိကျမှန်ကန်မှုရှိခြင်း
1. အီး / ISO13485 / အဖြူရောင်စာရင်း
SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (COVID-19 Ag) လည်ချောင်းနှင့်နှာခေါင်းလျှို့ဝှက်ချက်များကို အသုံးပြု၍ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
●လည်ချောင်းလျှို့ဝှက်ချက်များ - မြုံသော swab ကိုလည်ချောင်းထဲထည့်ပါ။ pharynx ၏နံရံပတ်လည်လျှို့ဝှက်ချက်များကိုညင်ညင်သာသာခြစ်။
●နှာခေါင်းလျှို့ဝှက်ချက်များ - မြုံသောသုတ်ဆေးကိုနှာခေါင်းတွင်းနက်ထဲထည့်ပါ။ တာဘိုင်၏နံရံကိုအကြိမ်ကြိမ်ညင်ညင်သာသာလှည့်ပါ။ တတ်နိုင်သမျှ swab စိုစွတ်စေ။
● ၀.၅ မီလီမီတာအကွက်အကွက်များစုဆောင်းပြီးနမူနာစုဆောင်းခြင်းပြွန်ထဲသို့ထည့်ပါ။ အဆိုပါ swab ကိုပြွန်ထဲသို့ထည့်ပါနှင့်နမူနာ၏ swab ၏နမူနာမှထုတ်ယူရန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပြွန်။ အဆိုပါ assay ကြားခံအတွက်လုံလောက်သောဖြေရှင်းနမူနာလုပ်ပါ။ အဆိုပါနမူနာစုဆောင်းခြင်းပြွန်ပေါ်သို့ကြည်လင်အစွန်အဖျားထည့်ပါ။
နမူနာကိုပြင်ဆင်ပြီးနောက် ၂ နာရီအကြာတွင်စစ်ဆေးမှုကိုပြုလုပ်သင့်သည်။ အကယ်၍ assay ကိုချက်ချင်းသယ်ဆောင်။ မရပါကပြင်ဆင်ထားသည့်နမူနာကို ၂၄ နာရီထက် ၂ နာရီထက်ပိုပြီး ၂-၈ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်သို့မဟုတ် ၇ ရက် - -20 ° C တွင်ထားသင့်သည်။
နမူနာများကိုစစ်ဆေးခြင်းမပြုမီအခန်းအပူချိန်သို့ယူဆောင်လာပါ။ အေးခဲနေသောနမူနာများကိုအရည်အချင်းမပြည့်မှီမီနှင့်ကောင်းစွာမွှေနှောက်ရမည်။ နမူနာများကိုနှစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးအေးခဲစေပြီးအကြိမ်ကြိမ်အရည်ပျော်အောင်မလုပ်သင့်ပါ။ နမူနာများကိုတင်ပို့ရမည်ဆိုပါက၎င်းတို့သည် etiologic agent များအားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ဖယ်ဒရယ်စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီထုပ်ပိုးထားသင့်သည်။
၁။ SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (COVID-19 Ag) အတွက်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်
2. 2019-NCOV AG စမ်းသပ်ကိရိယာ၊ IGG / IGM စာမေးပွဲ၊ Angtine test၊ Antibody test ပေးသည်။
၃. 2019-ncov Test Kits အတွက်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုနှင့်ထုတ်ကုန်သင်တန်းပေးခြင်း
၄။ COVID-19 Ag စမ်းသပ်ချွတ်ရန်အတွက် Uncut စာရွက်နှင့်ပစ္စည်းများကိုထောက်ပံ့ပါ
ရှေ့သို့ လူများအတွက် SARS-CoV-2 IgGIgM Antibody Rapid Test Kit
နောက်တစ်ခု: 2019-NCOV လျင်မြန်စွာ Antigen စမ်းသပ်မှု Kit
ဝတ္ထု coronavirus Antigen စမ်းသပ်မှု